ဒံပေါက်စားကြဦးမလား | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ဝီရသူ မွတ်စလမ်ကိုမုန်းရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်း
ပုံမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ၊ ဘိရယာနီ ဒံပေါက်က အိန္ဒိယမှာပျံနှံ့တာကိုပြထားတယ်။ ဒံပေါက်ကတော့ ပါရှားမှာ စပြီးချက်ပြုတ် စားသောက်ခဲ့တဲ့ ရသာထူးကဲတဲ့အစားအစာပါ။ အိန္ဒိယမိုဂိုအင်ပါယာကို ကုန်သွယ်တဲ့ မွတ်စလင်ကုန်သည်တွေရဲ့ ကောင်းမှုနဲ့ ပါရှားကနေပြီးတော့ အရှေ့တောင်အာရှကို ဒံပေါက်ဆိုတဲ့ စားသောက်ကုန်ကြီး စိုက်စိုက်မြိုက်မြိုက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
ထူးဆန်းတာက အိန္ဒိယလည်းရောက်ရော၊ ဒံပေါက်ကို နေရာဒေသအလိုက် မတူညီတဲ့အရသာ အသီးသီးနဲ့ ကိုယ်ခံတွင်းတွေ့မယ့်ပုံစံ ချက်ပြုတ်စားသောက်ကြပါတယ်။
ပုံထဲမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်း ကရ်ှမီရ်းဒေသမှာဆိုရင် အစပ်ကဲတဲ့ စမုန်စပါးတစ်မျိုးကိုအမှုန့်ကျိတ်ရာမှာ ရရှိတဲ့ asafetida လို့ခေါ်တဲ့ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တစ်မျိုးကိုအသုံးပြုပြီးချက်ပါတယ်။ မိုဂိုဘိရယာနီကတော့ အသားနဲ့အစပ်များများထည့်ပြီး ချက်ပြုတ်ပါတယ်။ လက်ခနောင်းမြို့ရဲ့ ချက်ပြုတ်ပုံကတော့ အစပ်နည်းနည်းလျှော့ပါတယ်။ ကလ်ကတ္တားမြို့ကဒံပေါက်ကတော့ အာလူးကိုအသုံးပြုပြီးချက်ပြုတ်တယ်လို့ နာမည်ကျော်ပါတယ်။ ဘုံဘေဒံပေါက်ကတော့ တမူထူးခြားပါတယ်။ အချိုချက်ပါ။ အစပ်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ ဒံပေါက်ကတော့ ပုံထဲမှာပါ ငရုတ်သီးတောင့်ပြထားတဲ့အတိုင်း ဟိုက်ဒရာဘတ်က ဒံပေါက်ပါ။ ဘန်ဂလောရူး ဘိရယာနီကတော့ ဖူဒီနာရွက်ရယ်၊ တရုတ်နံနံစေ့ရယ် ထည့်ချက်ပါတယ်။ ဒင်ဒူဂိုင်း ထလပါကတ္တီး ဘိရယာနီက ထူးခြားတဲ့အရာသာရှိပြီး ငရုတ်သီးကိုမွှေးကြိုင်နေအောင် နိုင်နိုင်ထည့်ပြီးချက်ပြုပ်ပါတယ်။ မလာဘာရ်ကဒံပေါက်ကတော့ အရသာနည်းနည်းပေါ့ပေမယ့် မွှေးကြိုင်ပါတယ်တဲ့။
အိန္ဒိယကနေတစ်ဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုပါ ဒံပေါက်ရောက်လာပုံပါပဲ။ အခုဆိုရင်ဒံပေါက်က မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ခေတ်စားတဲ့ မွတ်စလင်တို့စတင်ချက်ပြုတ်တီထွင်ခဲ့တဲ့ စားသောက်ကုန်တစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။ မွတ်စလင်ကိုမုန်းတီးပါတယ်ဆိုတဲ့ ဒံပေါက်မစားပဲမနေနိုင်တဲ့ မျိုးညစ်အုပ်စုကလည်း ဒံပေါက်ကို ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ၉၆၉ မြန်မာဒံပေါက်ဆိုပြီး ဟာသဆန်ဆန် ချက်ပြုတ်ရောင်းချပါတယ်။ တောင်သာတပ်မတော်ရဲ့ စစ်ဦးစီးချုပ်လို့ အများတင်စားခေါ်ဝေါ်တဲ့ ဒီပဲယင်းအမည်းအောင်သောင်းကို အမေရိကန်ကနာမည်ပျက်စာရင်းတင်သွင်းရာမှာ မကျေနပ်တဲ့အတွက် နေ့စားဆန္ဒပြသမားများငှားရမ်းကာ ဒံပေါက်ကျွေးမယ်လို့ ဆွယ်ခဲ့တဲ့တာကနေတစ်ဆင့် ဆန္ဒပြပွဲကနေ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ဒံပေါက်လုပွဲဖြစ်ခဲ့အထိအသွင်ကူးပြောင်းသွားရလောက်အောင် ဒံပေါက်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခေတ်စားလွန်းပါတယ်။ မွတ်စလင်ကိုမုန်းတီးသူတွေမစားပဲမနေနိုင်တဲ့ ဒံပေါက်ပါ။
အိုဘယ့်… ဒံပေါက် (ဘိရယာနီ)
Biryani from Wikipedia
Biryani (pronounced [bɪr-yaːniː]) isamixed rice dish from South Asia. It is made with spices, rice and meat or vegetables.
The origin of Biryani is uncertain. In North India, it is traditionally associated with the Mughlai cuisine of Delhi and the Awadhi cuisine of Lucknow; in South India, it is traditionally associated with the Hyderabadi cuisine
Read more here @ Biryani from Wikipedia
If there is suchathing as foods of the God, it is undoubtedly the biryani. The magic of biryani lies in the way rice is transformed into something ambrosial.” – Pratibha Karan
Read more here @ 10 Best Biryani Recipes
This entry was posted on December 2, 2014 at 1:44 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.